डा.बाबुराम भट्टराई संसदबाट बेपत्ता ! – YesKathmandu.com
डा.बाबुराम भट्टराई संसदबाट बेपत्ता !
काठमाडौं । नयाँशक्ति नेपालका संयोजक तथा पूर्वप्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराई गोरखाबाट निर्वाचित सांसद हुन् । तर उनी संसद बैठकमा जाँदैनन् ।
संसदको बैठक २१ फागुनदेखि जारी छ । बैठकले सभामुखको निर्वाचनदेखि प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनसम्म सम्पन्न गरिसकेको छ । आइतवार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निर्वाचनकै माध्यमतबाट दुई तिहाई बहुमत लिए । तर संसदमा आफ्नो मत जाहेर गर्नुपर्ने पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराई भने उपस्थित भएनन् ।
साना र ठुला सवै दलले आफ्ना विचार ब्यवस्थापिका संसदमा राख्दै आएका छन् । तर राष्टिय मान्यता नपाएका साना दल पनि पार्टीकै भूमिकामा उपस्थित छन् । तर भट्टराई अहिलेसम्मका कुनैपनि बैठकमा उपस्थित भएका छैनन् ।
संसदमा नयाँशक्तिबाट उनी मात्रै निर्वाचित सांसद हुन् । ब्यवस्थापिका संसदमा उनको पार्टी सानो भएपनि नेपाली राजनीतिमा उनको उचाई ठुलो छ । ब्यवस्थापिका संसदमा पुगेर आफ्नो विचार दिने, सरकारलाई सकारात्मक काममा सहयोग र गल्ती गरेमा सुधार गराउने उनको पनि जिम्मेवारी छ । तर भट्टराई ब्यवस्थापिका संसदबाट बेपत्ता भएका छन् ।
देउवा समूहका विद्यार्थी बाहिर, संस्थापनका भित्र, अति भएपछि बालुवाटारभित्रै नारावाजी
लोकमानसिंह कार्की विरुद्धको मुद्दाहरुको सुनुवाइ बिहिबार देखि
ग्यास उद्योग मापदण्डविपरीत हुनसक्ने भन्दै आजबाट अनुगमन
जाँदाजाँदै ओलीको कीर्तिमान,सडकमा मान्छे उतारे वापत राजीव पहारीलाई खेलकुद विज्ञ नियुक्त !